29|11|09 – STN – CULTE [Neutchâtel, CH]
<< Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy,
fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain’Andriamanitra
ho an’ny tenany…>> I Petera 2 :9
Faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Jesosy Kristy Tompontsika !
Tonga indray izao ny fotoanan’ny fiaraha-mivavaka amin’ny teny malagasy aty Neuchatel.
Hiarahan-tsika mpianakavy amin’ny finoana midera sy mankalaza an’Andriamanitra, ILAY feno Fahasoavana sy Fahamarinana.
Ny fotoam-pivavahana tsy miova fa manomboka 3 ora tolakandro, ny toerana koa tahak’izany ao @ Paroisse la maladière ihany.
Hisy kosa anefa fianaran-kiran’ny Noely, izay atomboka amin’ny
1ora tolakandro, ka miangavy antsika samy ho tonga aloha amin’io fianaran- kira io satria efa akaiky ny fotoana.
Farany, misy ny fiaraha-misakafo aorianan’ny fiaraha-mivavaka, izay hanasana antsika rehetra ihany koa.
Dia mametraka ny firarian-tsoa ho antsika rehetra tompoko !
Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany !
Toerana : Paroisse de la Maladière, antsinanan’ny hôpital Portales
agenda, antsika, chrétien, culte, fahasoavana, fkmsm, gasy, kristiana, madagascar, malagasy, malgache, midera, Neuchâtel, neutchâtel, noely, nouvelles, Paroisse, soisy, suisse, vaovao, vavaka, œcuménique, œcuménisme